सिंह राशि सिंह लग्न भएका व्यक्तिले मणिक धारण गर्दा मिल्नेछ यस्ता लाभ « Lokpath
२०७६, ६ फाल्गुन मंगलवार १२:५०
प्रकाशित मिति : २०७६, ६ फाल्गुन मंगलवार १२:५०
काठमाडौं – मणिक (Rubi) कसले धारण गर्ने र किन धारण गर्ने ? मणिक (Rubi) सूर्य ग्रहको रत्न हो ।
ब्रह्माण्डमा जती पनि ग्रहहरु छन् ति सबै सूर्यको परिक्रमा गर्दछन् । ज्योतिष शास्त्र पनि सूर्य सिद्धान्तलाई नै आधार मानेर गणना गरिन्छ । रत्न बिना ज्योतिष शाश्त्र अपुरो जस्तै मानिन्छ । रत्नको बारेमा ऋग्वेदमा वर्णन गरिएकोछ । ऋग्वेदमा ग्रह हरुबाट आउँने नकारात्मक उर्जा हरुलाई हटाई सकारात्मक उर्जा ग्रहण गर्नको लागी रत्नको प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सूर्यलाई ग्रहहरुको राजा मानिन्छ । यो सन्सार सूर्यबाट नै चलायमान छ । सूर्यको उपाशनाको प्रथा वा प्रमाण प्राचीन सभ्यतामा उल्लेख गरिएकोछ । सूर्य एक मात्र प्रकाश दिने ग्रह हो । यसको प्रकाशबाट सबै ग्रहहरुले उर्जा लिईरहेका हुन्छन् । यहाँ सम्मकी मानिस,जीवजन्तु,वनस्पती पृथ्वी सबैले सूर्यबाट उर्जा लिईरहेका हुन्छन् । सौर्यमण्डलका सबै ग्रहहरु सूर्यको परिक्रमा गर्दछन् । सूर्य नै सबै जीव जन्तुको जीवन तत्व हो त्यसैले सूर्यलाई जीवको आत्मा भनिन्छ ।
मणिकको धारण दुवै (कृष्ण पक्ष वा शुक्ल) पक्षमा गर्न सकिन्छ । जुन पक्षमा धारण गरे पनि शुभ फल प्राप्त हुन्छ । योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिएर वा चिना तथा कुण्डली राम्रो सँग देखाएर मात्र मणिक धारण गर्नु पर्दछ । बिशेष गरी सिंह राशि भएका वा सिंह लग्न भएका व्याक्तिहरुले आईतबार बिहान यसलाई धारण गर्नु पर्दछ । पुरुष भए दाहिने हातको साहिँली औला (Ring Finger) मा र महिला भए देब्रे हातको साहिँली औलामा धारण गर्नु पर्दछ ।
सूर्य मुटुको कारक ग्रह हो र साहिँली औलाको सम्बन्ध सिधै मुटु सँग हुन्छ । सुर्यको रत्न मणिक कहिलै पनि चाँदीमा धारण गर्नु हुदैन किनकी सूर्य एकदमै तातो पिण्ड हो । सूर्यबाट आउँने उर्जा र चाँदीबाट निस्कने उर्जा जुध्ने हुनाले नकारात्मक फल प्राप्त हुन्छ । यदि मणिक चाँदीमा धारण गरियो भने मानिसको मानशिक असन्तुलन बिग्रने,निर्णय क्षमतामा कमी आउँने, ईच्छा शक्तिमा कमी आउँने,डिप्रेसनमा जान सक्ने,बन्दै गरेका काम बिग्रने,दुविधामा पर्ने आदी समस्याहरु आउँन सक्छ । त्यसैले मणिक धारण गर्दा ताबा,पित्तल र सुनको प्रयोग गर्नु पर्दछ । धारण गर्ने बेलामा घडीमा ४५ मिनेट गएको हुनु हुदैन अर्थात यो रत्न धारण गर्दा घडीमा सवा ६,सवा ७,सवा ८ वा यस्तै समय भएको हुनु पर्दछ । गलत समय र गलत धातुमा धारण गर्नाले हानी हुन सक्छ,यस कुरामा सधै ध्यान दिनु पर्दछ ।
ग्रहहरुको मन्त्रिमण्डलमा सूर्यलाई राजा मानिन्छ । राज्यमा सूर्यले राजनीति,उच्च पोष्ट तथा कार्यकारी पदको प्रतिनिधित्व गर्दछ । मणिक धारण गर्नाले राजनीति गर्नेहरुले राज्यमा उच्च पोष्ट पाईने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । राज्यबाट पाईने मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि हुन्छ । सूर्य आत्मा, हड्डी, आँखा, पिता, रातो रङ, औषधि, उन, गहुँ , सेतो कागज, देवालय, शिव मन्दिर तथा पर्वतको कारक मानिन्छ । यदि हामीले मणिक धारण गर्ने हो भने मुटु स्वस्थ्य हुने, हड्डीहरु बलियो हुने, आँखा तेजिलो हुने, बुवासँगको सम्बन्धलाई थप राम्रो बनाउने तथा माथिका कारक तत्वमा बृद्धी भई शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।
ब्रमाण्डमा भएका सबै ग्रहहरु सूर्यको परिक्रमा गर्दछन् भने सूर्य ब्रमाण्डको केन्द्र बिन्दु हो । सूर्य पृथ्वीबाट १४९.६ मिलियन किलोमिटरको दुरिमा अवस्थित रहेकोछ । सूर्य पृथ्वीभन्दा १३ लाख गुना ठुलो रहेको छ । सूर्यको तापक्रम १ लाख अंस फरेनहाईट रहेकोछ । ब्रमाण्डमा भएका सबै ग्रहहरु सूर्यबाट प्रकास तथा उर्जा ग्रहण गरि चम्किरहेको हुन्छन् । त्यसैले सूर्यबाट नकारात्मक उर्जा आईरहेकोछ भने मणिकले मात्र त्यो नकारात्मक किरणलाई रोकी सकारात्मक उर्जा प्रवाह गर्दछ ।
ज्यो. दुर्गा प्रसाद भण्डारी ।